Xubno ka tirsan Maamulka Degmada Waaberi oo jir dilay Wariyaal ka tirsan Idaacada Shabelle - Awdinle Online
Xubno ka tirsan Maamulka Degmada Waaberi oo jir dilay Wariyaal ka tirsan Idaacada Shabelle
Iyadoo maalintii shalay ay ku beegneyd Maalinta Caalamiga ah ee Xoriyadda Saxaafadda, ayaa waxaa weli socda tacadiyada lagu haayo wariyeyaasha, kaddib markii maanta Gabar wariye aheyd iyo camera man ka tirsan Telefishinka iyo Idaacadda Shabelle lagu jirdilay Xarunta degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir.
Wariye Safiyo Aadan Cusmaan oo ka tirsan Telefishinka Shabelle iyo Camera Man Gacal ayaa lagu jirdilay xarunta degmada, waxaana soo gaaray dhaawacyo.
Gabadha wariyaha ah ayaa la geeyay isbitaal, kaddib markii dhagax lagu daqray, wararka ayaa sheegaya in Guddoomiye waaxeed uu jirdilay
Labada Wariye ayaa xilliga la jirdilayay waxay ka soo waramayeen banaan bax ka socday degmada oo ay dhigayeen haweenka Nadaafadda, kaddib markii uu maamulka degmada uu ku eedeeyay inuu musuq maasuqay raashin mucaawino ah oo loogu tala galay.
Wararka ayaa intaa ku daraya in jirdilka ay wariyeyaashan u geysteen Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, sida Guddoomiye waaxeedyo ka tirsan degmada oo dharbaaxo iyo dhagax isugu daray
Ururada Saxaafadda ayaa baaq ay shalay soo saareen waxay ku sheegeen inuu kordhay tacadiga iyo dhibaatooyinka lagu haayo saxaafadda, iyagoo ugu baaqay dowladda Federaalka inay wax ka qabato dhibaatooyinkan.
Previous articleWasiiru-dowlaha Gaadiidka Xukuumadda Sudan oo laga helay Coronavirus.
Next articleAmar horey u soo saaray Duqa Muqdisho oo socon waayay